August 26, 2019 - Myitter
August 26, 2019 Myitter 0
တရုတ်နဲ့ ဂျပန်တွေ အရမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က အနက်ရောင်သဲများအကြောင်း ဒီတလော သတင်းမှာ တွေ့နေရတာကရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် (အငူမော်)ကျွန်းက အနက်ရောင် သဲများကို တရုတ်ပြည်က စိတ်ဝင်စားပြီး လာရောက် စမ်းသပ်မှု တွေ ပြုလုပ်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ။ မြန်မာပြည်သူ အများစုကတော့ အဲဒီ အနက်ရောင်သဲတွေက ဘာလဲ၊ ဘယ်မှာ […]
ရေနံချောင်းမြို့ အထက( ၁)ကျောင်းတော်ကြီးမှ ထုးချွန်ထက်မြက့်ကြပြီး ထူးခြားသော လူရည်ချွန် ညီအစ်ကို အရင်း (၄) ဦး ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်…။ ထိုအထဲ…ဆရာတော် အရှင် ဆန္ဒာဓိက ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး သိထားသော ထင်ရှားတဲ့ ဆရာတော်ကြီး တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ အရှင်ဆန္ဒာဓိက( ၃ထပ်ကွမ်းလူရည်ချွန် ) မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဒုတိယ […]
သေဆုံးသူနဲ့ အတူထည့်ပြီး မီးသဂြိုလ်ခဲ့ပေမယ့်ထူးခြားစွာမီးလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိခဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး၏ ပုတီး
သေဆုံးသူနဲ့ အတူထည့်ပြီး မီးသဂြိုလ်ခဲ့ပေမယ့် မီးမလောင်ခဲ့တဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး၏ ပုတီ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရား၏ ပုတီးကုန်းလေး ထူးခြားစွာမီးလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝလ(၃)ရက် ၊ မနက် (၀၇:၀၀ ) အချိန်တွင်ကွယ်လွန်သူ ဦးအားဖာ၏ မီးသဂြုင်္ိဟ်ပြီးကျန်ရစ်သောအရိုးပြာများအား မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများ၊ တာချီလိတ်နာရေးကူညီမှုအသင်းသားများမှနွားနို့များသွန်းလောင်း ၍ ကောက်ယူခဲ့ကြပါသည်။ ထူးထူးခြားခြား ဦးအားဖာ၏လည်ပင်း၌ […]
အမေရိကန်ကိုဝင်မယ့် မုန်တိုင်းကို နျူကလီးယားဗုံးခွဲပြီး ချေဖျက်ဖို့ အကြံပေးတဲ့ ဒေါ်နယ်ထရမ့်
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က နိုင်ငံကုန်းတွင်းပိုင်းဆီ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း မဝင်ခင် နျူကလီးယား ဗုံးခွဲပစ်ဖို့ အကြံပြုခဲ့ကြောင်း Axios သတင်းဌာနက တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဟာရီကိန်းအရေး ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုမှာ အာဖရိက ကမ်းရိုးတန်းအလွန်မှာ ဖွဲ့တည်တဲ့ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေကို ချေဖျက်ဖို့ မုန်တိုင်းမျက်စိထဲကို နျူကလီးယားဗုံး ပစ်ထည့် ဖောက်ခွဲပြီး မုန်တိုင်းကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ဖွယ် […]
ရှားစောင်းလက်ပတ်_အစွမ်းအံ့မခန်း ၂ လက်မ အရွယ်ဖြတ်ပြီး မီးကင်တယ် ဆိုရုံလေး ကင်ပါ ။၅ ပြားလောက် စားပါ သွေးဝမ်းသွားခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေနိူင်ပါတယ်ရောဂါ ဆိုးရင်တော့ နေ့စဉ် တစ်ပတ်လောက်ဆက်စားပါ ။ ၂။ မီးကင်ထားသော ရှားစောင်းလက်ပတ်ကိုနေ့စဉ် ၅ ပြားလောက်စားပေးခြင်းအားဖြင့်လည်း အတွင်းလိပ်ခေါင်း ရောဂါကို ပျောက်ကင်း စေနိူင်ပါတယ် ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်ကို […]
လျှပ်စစ်ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ထွန်းနိုင် ခြိမ်းခြောက် ခံနေရ…
လျှပ်စစ်ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ထွန်းနိုင် ခြိမ်းခြောက် ခံနေရ… စစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့ မီတာတင်ဒါပယ်ချမှုအပေါ် ပြောစကားများကို လျှပ်စစ်ဒုဝန်ကြီး တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်ကြောင်း Ever Meter ကုမ္ပဏီ မှ MD ဦးမျိုးအောင်က ခြိမ်းခြောက် ပြောကြားလိုက်သည်။ NLD အစိုးရရဲ့ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ဒုဝန်ကြီး […]
မင်းဂွတ်​သီး ကျပ် ၅၀၀၀ ဖိုးကြောင့် တံတားဦး​လေဆိပ်​တွင်​ ခံဝန်​လက်​မှတ်​ထိုးရခြင်း
မင်းဂွတ်​သီး ဘတ် ​၁၀၀ ဖိုး (မြန်​မာ​ငွေ ကျပ်​ငါး​ထောင်​ဖိုး)တံတားဦး​လေဆိပ်​တွင်​ စစ်​​ဆေး ခံဝန်​လက်​မှတ်​ထိုးရခြင်း (အောက်​​ခြေပြည်​သူလူထု ဘယ်​​လောက်​ထိ အကျစ်​ခံအရစ်​ခံ​နေရသလဲဆိုတာ အများသိနိုင်​ဖို့ပါ) မ​နေ့ကဘန်​​ကောက်​​လေ​ကြောင်​နဲ့ပြန်​လာတယ်။​ ၆နာရီ၂၅ မိနစ်​မှာမန်း​လေး​လေဆိပ်​​ရောက်​ ပစ္စည်း​တွေ လုံခြုံ​ရေးစက်​ဖြတ်​ပါတယ်​။ အဲဒီမှာပြဿနာစတာပါဘဲ စက်​နားမှာစုထိုင်​​နေတဲ့ယူနီ​ဖောင်းဝတ်​အမျိုးသမီးက ဂျပ်​ဘူးထဲကဘာ​တွေလဲ​မေးပါတယ်​။ မင်းဂွတ်​သီးပါလို့​ပြောလိုက်​တယ်။​ မင်းဂွတ်​သီးတဲ့ မင်းဂွတ်​သီးဆိုစစ်​ရမယ်​လို့ အလားတူယူနီ​ဖောင်​ဝတ်​လူကိုလှမ်း​ပြောတယ်။​ မျက်​နှာ​တွေက […]
တခလကဝန်ကြီးတွေအမတ်တွေ ဦးဦးရဲတွေနှင့်အုပ်ချုပ်သူတွေ…. သက်တော် (၇၃)ဝါတော်(၄၀)ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်အစစ်ကို ရှမ်းရိုးမကွင်းရှေ့ကကလေကချေကဘုန်းဘုန်းဆွမ်းခံကြွလာချိန်ကိုပိုက်ဆံတောင်းတာမပေးလို့ဆိုပြီးထိုးလွှတ်လိုက်တာမြင်မကောင်းပါဘူး ဘုန်းဘုန်းကိုကျမတို့မိသားစုထိုင်ဆွမ်းလောင်းလာတာ(၇)နှစ်ရှိပါပီ လမ်းဘေးကကလေကချေတွေကိုမြို့ဂုဏ်တင့်တယ်ထင်ပြီးအလှကြည့်နေတာတော်လောက်ပီထင်တယ် ဆိုင်ထဲထိလဲဖုန်းလာခိုးပြီးထွက်ပြေးတာလဲကြုံပီးပီလောင်းကစားဝိုင်းတွေဘဲရံပြီး မြို့နေလူတွေအန္တရာယ်ကင်းအောင်လဲလုံခြုံရေးစနစ်တွေကြပ်မတ်ပေးပါအုံး တခလက ဝန်ကြီးတွေအမတ်တွေလဲပြည်သူတွေကြားထဲမှာဘယ်လောက်လုံခြုံမှုမဲ့နေလဲဆိုတာအပြင်လေးဘာလေးထွက်ကြည့်ကြပါလို့အသိပေးခြင်ပါတယ်… Thitsar Nge UNICODE VERSION တခလကဝနျကွီးတှအေမတျတှေ ဦးဦးရဲတှနှေငျ့အုပျခြုပျသူတှေ…. သကျတျော (၇၃)ဝါတျော(၄၀)ရှိပွီဖွဈတဲ့ဘုရားသားတျောအစဈကို ရှမျးရိုးမကှငျးရှကေ့ကလကေခကြေဘုနျးဘုနျးဆှမျးခံကွှလာခြိနျကိုပိုကျဆံတောငျးတာမပေးလို့ဆိုပွီးထိုးလှတျလိုကျတာမွငျမကောငျးပါဘူး ဘုနျးဘုနျးကိုကမြတို့မိသားစုထိုငျဆှမျးလောငျးလာတာ(၇)နှဈရှိပါပီ လမျးဘေးကကလကေခတြှေကေိုမွို့ဂုဏျတငျ့တယျထငျပွီးအလှကွညျ့နတောတျောလောကျပီထငျတယျ ဆိုငျထဲထိလဲဖုနျးလာခိုးပွီးထှကျပွေးတာလဲကွုံပီးပီလောငျးကစားဝိုငျးတှဘေဲရံပွီး မွို့နလေူတှအေန်တရာယျကငျးအောငျလဲလုံခွုံရေးစနဈတှကွေပျမတျပေးပါအုံး တခလက […]
မျက်ရည်တွေကို ဘူးသီးလုံးလောက် စုထားကြပါ ….
NLD အစိုးရရဲ့ လက်ရှိသမ္မတကြီး ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ စေတနာ နယ်စပ်ဝင်ပေါက်တွေမှာ စောင့်ကြပ်နေသော အရာရာထွင်းဖောက်မြင်နိုင်သည့် X Ray စက်ကြီးတွေကြောင့် အပြားတွေ အလုံးတွေဟာ အတောင်ပံ နဲ့ ပျံလာမှပဲ ဗမာပြည်ထဲကို ဖြတ်သန်းခွင့်ရတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ဒီလို တင်းကြပ်မှုတွေကြောင့် တိုင်းပြည်ကို ဘိန်းစားဘဝရောက်အောင် စီးပွားရှာစားနေခဲ့တဲ့ […]
မိုးမိတ်မှာ မူးယစ်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင် အချင်းချင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး နှစ်ဦးသေဆုံး
မိုးမိတ်မှာ မူးယစ်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင် အချင်းချင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး နှစ်ဦးသေဆုံး Monday, August 26, 2019 ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ မိုးမိတ်မြို့၊ တောင်ပိုင်းရပ်ကွက် ရွာတော်လေးမှာ သြဂုတ်လ၂၅ရက် ညပိုင်းအချိန်က မူးယစ်အထူးတပ်ဖွဲ့မှ အချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကနဦးသတင်းရရှိပါတယ်။ “ရဲအရာခံဗိုလ်က အပြင်ထွက်ပြီး လည်ပတ်တဲ့ကိစ္စကို ဒုရဲအုပ်က မသွားဖို့ […]